Harowo.com | HarawoNews – Somalia Information & Analysis – Waxan doonayaa inaan Rasaas la dhaco soo galootiga
Waxan doonayaa inaan Rasaas la dhaco soo galootiga
Oct 15, 2016 SOMALI NEWS 0
Dinko Valev Waa 29 jir is mahadiyay oo u dhashay Bulgaria wuxu ku fadhiyaa kursi goob cafeega laga cabbo, gacmihiisu waxay u saaranyihiin dhakadiisa xiiran. Waxa uu dhigtay uu Mercedes 500 Coupe Zinedine meel aan ka fogeyn . Waxa barbarkiisa fadhida saaxiibadii oo oo marka isaga la wareysanayay iyadu si degan kursiga ugu dangiigta iyadoo aamusan.
– Waxaan ku wareegaa soohdinta teedsan anigoo wata afar taayirrahayga. Waxan tagoogga qabtay in ka badan 100 qaxooti ah. Toban jeer baan ku soo baxay oo tobanka goor ba dadbaan qabtay. Xoog baan ku qabtaa markaasaan dhulka galiyaa kadibna booliskaan u wacaa.. Anigu waan jeclahay dalka. Ma doonayo in wuxuushtani la wareegaan dalka. Muslimiinta! ma waxaad ka arki kartaa? Muddo shan sano ah ayay meel walba buux-dhaafinayaan haddii aanan la iska joojin. Sidaasay isku daba taaganyihiin.
Haddii mid ka mid ah yahay Taliban kaasaa wax burubrinaya inta kalana wuu duufsanayaa. Ma doonayo iyaga in ay ku noolaadaan dalka, Ma doonayo iyaga in ay ku noolaadaan Europe.
Dinko Valev wuxu caan ka noqday Bulgaria baacsiga dadka qaxootiga ah ama soo galootiga ah. Mar uu faanayay Waxa uu sheegay in 3000 oo qof uu ku ururin karo habeen haddii loo baahdo. Waxa kale oo uu sheegay in shan xisbi mid walba dhankiisa u doonayaa inuu kusoo biiro. Waraysi kale wuxu ku sheegay in toban dhinac doonayaan inay la soo wareegaan.
Waxaa cad in Dinko Valev aanu arinkan kali u ahay. Duqa magaalada soohdinta ku taal ee Topolovgrad ayaa ka codsaday Waaxda Difaaca ee dalka in 30 qoryaha iyo gawaarida gaashaaman ah laga qotomiyo ilaalinta xadka si iskaa wax u qabso ahna looga hawl-galo.
Dinko Valev waa 29 sano jir. Waxa leeyahay shirkadda biraha duugga ah. Saddex sano ayuu ka shaqeeyay McDonald ku yaal dalka Ingiriiska, laakiin wuxu sheegay inaanu u riyaaqin joogitaanka Ingiriiska.
Waxa uu sheegay in uu meheradan biraha duuga ah lagusoo daadiyo ku bilaabay 250 euros imikana ay ka shaqeeyaan illaa 50 shaqaale ah. Wuxu diiday in la sawiro Mercedes-kiisa.
– Waxaan qabaa, in dib loosoo celiyo sharciyadii hore ee toogashada si aan u tooganno kuwa isku dayaya in ay ka gudbaan xadka si sharci darro ah.Horeyso iyo Dambeysaba waan kasoo horjeedaa diintooda, waayo, waa qaar jibbaysan waxay yihiin jirin oo maskaxda laga bedelay ama laga maydhay.
Bulgaria, Coupe Zinedine, Dinko Valev, Waaxda Difaaca
Wasiirada A/Dibadda USA iyo UK oo ka fikiraya cunaqabatayn Ruushka iyo Suuriya la saaro . Hillary Clinton iyo Trump oo Qoob ka cayaar . DAAWO